अर्बपति बिल गेट्स र मेलिन्डाले अन्त्य गरे २७ वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध | Taja Update
यो वर्ष मलको अभाव नहुने
बैशाख २१, काठमाडौं । धन ठुलो कि मन ठुलो ? यो प्रश्न सधैं उठ्ने गर्छ । के माया, सम्बन्ध र जिवनका उकालीमा धन मात्र पर्याप्त छ त ? यो प्रश्नको उत्तर पनि अनुत्तरित छ । धेरै बर्षसम्म संसारको नंबर वान धनाढ्य सुचीमा सुचिकृत बिल गेट्सको दाम्पत्य जिवनमा पनि यस्तै प्रश्नको उत्तरले डेरा जमाएको छ । गेट्स दम्पती सम्बन्धबिच्छेद भएपछि आज विश्वभर धन र प्रेमले चर्चा पाएको हो ।
अमेरिकी धनाढ्य तथा माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिन्डा गेट्सले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । बिल र मेलिन्डाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूहरू २७ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई निरन्तरता नदिने निर्णयमा पुगेको जानकारी गराएका छन् ।
सन् १९९४ मा विवाह गरेका उनीहरूका तीन सन्तान छन्। बिल र मेलिन्डाले सामाजिक कार्य गर्नका लागि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन पनि बनाएका छन् । सम्बन्धविच्छेद भए पनि फाउन्डेसनमा उनीहरूले सँगै काम गर्ने बताएका छन् ।
कुनै बेला संसारकै धनी व्यक्ति रहेका बिल गेट्स अहिले पनि संसारकै चौथो धनी व्यक्ति हुन् । फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार उनीसँग अहिले १२४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ ।
बिल गेट्सले सन् १९७०को दशकमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीको स्थापना गरेका थिए । मेलिन्डाले सन् १९८७ मा माइक्रोसफ्टमा प्रोडक्ट म्यानेजरको रूपमा काम सुरू गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रेममा परेको यो जोडीले सन् १९९४ विवाह गरेको थियो । यसअघि अमेजनका मालिक अर्बपति जेफ बेजोसले पनि आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए ।
बैशाख, २१ काठमाडौं । सरकारले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहाललाई फिर्ता बोलाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत दाहालले आफूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीमार्फत जानकारी पाएको बताइसकेका छन् । मुख्यसचिव बैरागीले टेलिफोन गरी मन्त्रिपरिषदले […]